Karakarain’ny sampana ara-kolontsaina ao amin’ny ivon-toerana ho an’ny kolontsaina alemana-malagasy na ny CGM. Hotanterahina eny Antsonjombe ny 10 aogositra izao ny hetsika ho an’ny zavakanto ankehitriny nampisalorana ny anarana hoe « Urban Heart ». Hetsika …Tohiny
Niditra tamin’ny andro faharoan’ ny fifanintsanana amin’ny hetsika iraisam-pirenena « Basikety Somaroho 2018 » andiany faharoa. Fifaninanana eo amin’ny sokajy N1A lehilahy ary tanterahina ao Nosy-Be, ao amin’ny kianja mitafo, ny 28 jolay hatramin’ny 4 …Tohiny
Notokanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly teny Ampitifirana Ankatso ny tsangambato fahatsiarovana ny faha-70 taona nitifirana ireo mahery fon’ny firenena, ny lietna Randriamaromanana Albert ny alarobia 28 aprily 1948 sy Rakotondrabe Samuel, Ratsizafy Samuel, Bekamisy ary …Tohiny
Lehilahy iray mpianatra ao amin’ny oniversiten’Antsiranana no voalaza fa nisy naka an-keriny ny marainan’ny zoma lasa teo. Araka ny fanamarinam-baovao avy any an-toerana dia lasibatry ny fakana an-keriny teny an-dalana hamonjy ny toeram-pianarana izy, rehefa …Tohiny
Nikatona tanteraka ny ridaon’ny hetsika ara-panatanjahantena tanterahina amina torapasika nampitondraina ny anarana « Tamaga Midôla », izay nokarakarain’ny fikambanana Tafaray, ary teo ambany fiahian’Andriamatoa Mbola Rajaonah mivady, filoha tale jeneralin’ny Vondrona RLM Communication. Tontosa omaly, ...Tohiny